"बिस्वास" ....Trust.....: January 2009
"नया नेपालको निर्माण !!!"
दुई करोड नेपलिको एउटै चहाना थीयो सुनौलो र नया नेपालको निर्माण। जस्को आधार्भुत् बन्यो साम्भैधानिक् चुनाब। चुनबिक् विजय को शीलान्यास् राज्यशत्ताको प्द्धचुत बाट भयो। नाय नेपलाको कथावस्तु लेख्न्नको निम्ती लेखकहरुको होडबजि चल्यो। सुतेका उठेका, बसेका जङ्ग्ल पसेका,रङ्गी-चङ्गी सबै किशमका रज्नैतीक दलहरु मैदानमा आए। जनताको मन जितन दालहरु आफ्नो कलाको प्रदर्शनि गर्न सङ्घर्षराथ् भए। तर,निशानाभै होमीन पुगे युवा पुस्ता। कलम र चकको सट्टामा इट्टा र ढुङ्गा; र कालोपटीको बिलल्पको रुपमा नाम मत्रको कलोपत्रे सडकको प्रयोग गरियो। सडकमा नाआएकाले भने गोलीको बोलीम जनताको रगतले होलि खेल्दै आफ्नो तान्डभ देखाए। यसरी बनायीएको नेपाल चलाउनु आफैमा एक चुनौती पुर्ण कार्य थीयो जस्का लगी धेरै नै अनुभव र साहसको आवस्क्ता पर्छ।
शर्बमत् बिजेता दलको अशिम् अनुम्कम्पाले उपबिजेता पाटीबटा राष्ट्रपतिको नीउक्ती गरिन्छ जस्को कार्य नेपाललाई चलाउनी थीयो। तर, आफु शर्बमात् बिजएता भएर पनि नया नेपाल नामक सवरीसेवाको खलाशी बन्न रुचाउँछ। लाटलाई पापा दिँदा जशरि खुसीहुन्छ तेसैगरी नेपलीहरु दङ्ग पर्दै बस्छन् तमाशा हेर्न थल्छन्। नया नेपाल के हो र त्यसको गन्तब्य कता हो त्यो कुराको ज्ञान कसैलाई पनि थीएन। नाया नेपालको सेवा र परिकल्पनाहरु सबै पार्दशी हुने आष्वासन् जनताहरुमा जनाईन्छ। यस सेवाको प्रमुख एजेन्डा थीयो नेपाललाई पुन ढुङ्गे युगकै पालाको जस्तै गरि पुनर निर्मण गर्ने।
श्री गणेशाय नम: “Let’s Take The Nepal Back to The STONE AGE”.
यानिकी नेपाललाई पुन पहिलेको ढुङ्गे युगमा धकेलौं, पुन अन्धकारमा घचेढौं। जस्को ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा देखिन्छ दैनिकी १४ देखि १६ घन्टाको बिजुली कटौती। २१शौं सताप्दीमा बिकाशको प्रमुख आधरभुत मानिने बिजुली नै नभएपछी केपो आशा गर्न सकिन्छ र? तत्कलिन् अवस्थामा बिस्व द्रुत् गतीमा बिकाशतिर लम्कि रहेकोछ त्यो समयमा बिजुली बत्ती बिनाको सन्सर नेपालीहरु भोगी रहेकछन्। जुन देश जलशोर्तको धनी मनिन्छ त्यो देशमा दैनीक १४ देखी १६ घन्टाको “Practical Joke” ले सरकार हिँड्दैछ। देश बिकशको प्रमुख आधरभुत प्रयोग नै नगरेपछी साच्चीकैमा नेपाला ढुङ्गे युगमा पुग्न कति बेर लाग्छ र।
जापान,अंमेरिक,बेलायत लगायतका अन्य राष्ट्रहरु अन्तरिक्क्ष भ्रमण गर्ने यानहरुको निर्माणमा लगेका छन्। जो धर्तीमा मात्र नभै आकाशमा हवै पुल को र समुन्द्रा मुनि टनल सडकको निर्मण गरि रहेक छन्। यता नेपालमा भएक सडकको पनि रम्रो सुधार हुन सकिरहेको छैन्। सडकमा प्वाल नै प्वालको रजाईं छ। त्यस माथि पेट्रोलीयमको भाउले आकाश चुम्न लगि सक्यो। सो को अवभमा सरकर सवारीसधान चलानमा बन्धेज लगाउँदै छ। अब त्यो दिन टाडा छैन जब सम्पुर्ण नेपाली जनताहरु आधुनिक् सवारी साधन् छोडी पुन घोडा पाल्न र चड्न बेर लाउदैन्न। यतिको बिकाश भए पछि त कलोपत्रमा प्वाल टालिएको होइन बारु साडकनै देखन पाईदैन। केबल धुङ्गा र मटोले भरीएको घोडा कुदने घोडेटो मात्र हुन्छ। यती गरि सके पछित नेपाल अवश्य नै ढुङ्गे युगम पुगीहल्यो नी।
अन्तरिक्क्ष छुनि होडबजीमा त नेपाल निकै पहिले देखि नै थियो। तर बैज्ञानिक उपलब्धीले होइन, बरु मट्टितेल र ग्यसको चर्को भाउले हो। पहिलेको सरकरले पनि भाउ त अकाशेको त त्यो, तर पनी नेपालीले चोर बुद्धि लगाएर ईलेक्ट्रिक हिटरमा भात पकाउंथे। '……कसरि!!! घरको छानाबाट फलमको छड्के परेर।' यसै कुरालाई मध्य नजर गरी नया सरकरले दैनिकी १४ देखि १६ घन्टा बिजुली नै नचम्कनी पर्देको हुन्क्सक्छ।
सरकार “लौ पकाव भात अब!!! तेरीमा चोर भातमार जन्ता हो। बिगतको सरकारले घुस खाइ खाइ बिदेशी राष्ट्रहरुको आखँमा धुलो हलि हलि १० गुना सानो बनाईएको हाय्ड्रोइलेक्ट्रिक प्लान्टबाट आएको बिजुली चोर्नि तिमीहरु। तिमीहरुलाई त जनावरलाई जस्तै घाँस खान्दिनुपर्छ। लौ जात १६ घन्टे बिजुली शेवा अब हेरम पकाको भात।”
हुनपनि होनि ‘हरीयो बन नेपालको धन्’; अब देशलाइ ढुङ्गे युगमा पुर्याउनी भनेपछि बनबाट दाउरा ल्याउनी अनि खन पकाउनी!!! मट्टितेल छैन ग्यास पनि छैन बिजुली बत्तिको त खोइ आस पनि रहेन।
कुरा गरौ अब नेपालको सुरक्क्षा (छ्या छ्या छ्या)। जुन सरकारको जग नै हत्या के देला तेस्ले नेपालीको छोरा-छोरीको सुरक्क्षा। दैनिकी ‘बालबालीकहरु हरएको र पौसाकोलगी तिन्को हत्या’ खबरमा आउँछ। कता हरयो नेपालको शान्ति? कता गयो नया नेपालका नया पूस्ताको रक्क्षा? जङग्लमा हुंदा क्रान्तिको नाममा मारिए अब केका निम्ति मारिदैछन् त नेपालका युवा पूस्ता। कता गयो जिउ धनको सुरक्क्षा? सायद केही समय पछी नेपलका बुढा बुढीहरुलाई मर्ने बेलामा गङ्गा जल खुवाउन पनि कोही हुँदैन्न होल। पढेलेखेका जति बिदेशीए, बचेकूचेका क्रन्तिको आगोम होमिए र पलाउन लगेक साना पालुवहरु अपहरण् भै पैसाकोलगि मारिदैछन् । गङ्गा जल खान त परैको कुर शायद् बुढा बुढीहरुलाई मर्न र डढ्न पनि मिल्छकी मिल्दैन? आफैं जल खन्छु र आफै पोलीन जन्छु भन्दा पनी उनिहरुलाइ सुख छैन। पबित्र बग्मती परिवर्तन भै ढलमती भएकोछ। मरेपछी पोल्नलानी आर्याघाट 'पूजारि परिवर्तन कुस्ती अखाडा' भएको छ। रष्ट्रिय देवता र नेपालको शनातन धर्ममा त परिवर्तन् आएपछी भएनत नया नेपाल? जनताको त परीजावोस भगवन 'श्री पशुपतीनाथको' त सुरक्क्षा नभएपछि बनेनत नया नेपल?
Posted by Saban Poudyal at 12:30 PM5comments: